Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Axad Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub |
HomeCiyaarahaWararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Axad Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub
Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Axad Ah Ay Qoreen Wargeysyada Yurub
November 8, 2020 Admin Ciyaaraha 0
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ay saaka oo Axadah qoreen wargeysyada waaweyn, waxaana xuquuqda wararkan iska leh isla wargeysyada aanu kasoo xiganay oo aanu magacooda war walba ku hor qornay.
Dhexda weerarka Manchester City ee Phil Foden oo 20 jir ah ayaa loo saddex-jibaarayaa mushaharkiisa hadda, si uu qandaraas cusub u saxeexo. (Star)
Manchester City waxay danaynaysaa inay lasoo saxeexato laacibka da’da yar ee uu dhalay halyeygii Lillian Thuram ee Marcus Thuram, laakiin waxay tartan kala kulmayaan kooxaha Barcelona iyo Juventus oo kula dagaallamaya 23 jirkan Borussia Monchengladbach afka hore uga ciyaara. (Sun)West Ham ayaa dalab £30 milyan oo Gini ah ka gudbinaysa weeraryahanka reer France ee Moussa Dembele, waa se haddii ay diyaar u tahay Lyon inay iibiso 24 jirkeedan. (Sun)
Guddoomiyaha guud ee kooxda Lyon ee Vincent Ponsot ayaa daboolka ka qaaday in Arsenal ay ka mid ahayd saddex kooxood oo dalab kasoo gudbiyey khadka dhexe ee reer France ee Houssem Aouar suuqii xagaaga ee tegay, laakiin ay dhamaan dalabyadaasi ka hooseeyeen qiimaha 22 jirkan. (Sport Witness)
Bayern Leverkusen ayaa albaabada ka xidhatay Manchester United oo ka doonaysay 21 jirka reer France e egarabka weerakra ka ciyaara ee Moussa Diaby, waxaanay iska diidday inay wax wada-hadal ah la yeelato xagaagii dhowaa. (Bild)
David Beckham ayaa doonaya inuu lasoo saxeexdo saaxiibkiisii hore ee Real Madrid ee Sergio Ramos oo uu keeno Inter Milan marka uu difaacan 24 jirka ah dhamaado heshiiskiisa Madrid, xagaaga soo socda. (AS)
Goolhayaha reer Argentina ee Sergio Romero oo 33 jir ah ayaa meel ka gaar ah kooxda Manchester United ku sameeya tababarka, iyadoo uu rajaynayo in loo ogolaan doono in bisha January uu si xor ah ku baxo. (Sun)
Weeraryahanka Tottenham Hotspur iyo xulka qaranka England ee Harry Kane oo 27 jir ah, ayaa rumaysan in kooxdiisa Spurs ay fursad weyn u haysato inay ku guuleysato horyaalka Premier League, xili ciyaareedkan. (Mirror)
Tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta wax qoomamo ahi kama hayso inuu u ogolaaday goolhayaha reer Argentina ee Emiliano Martinez oo 28 jir ah, inuu sii joogo Premier League oo uu u ciyaaro Aston Villa. (Mirror).